Kooxaha Chelsea iyo Leicester City oo barbaro ku kala baxay, xili ay Blues wali guul gaari la’adahay… + SAWIRRO – Gool FM
Man United oo guuldarro kala kulantay Burnley & natiijooyinka kulamadii kale ee laga ciyaaray Premier League… + SAWIRRO
Kooxaha Chelsea iyo Leicester City oo barbaro ku kala baxay, xili ay Blues wali guul gaari la’adahay… + SAWIRRO
Dajiye August 18, 2019
(England) 18 Agoosto 2019. Kooxaha Chelsea iyo Leicester City ayaa ku kala baxay barbaro 1-1 ah kulankooda labaad ay ku wada ciyareen horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub ee 2019/2020.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1-0 ay ciyaarta ku hogaamineysay kooxda Chelsea.
Daqiiqadii 7-aad ee qeybtii hore ciyaarta Mason Mount ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa Chelsea, wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay kooxaha Chelsea iyo Leicester City ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed aad u fiican ee ku saleysnaa weerar iyo weerar celis, waxayna abuureen fursado dhowr ah ee loo filan karay goolal, inkastoo Leicester ay u muuqatay kooxda inta badan fursadaha sameeneysay.
Laakiin sheeko waxay isbadashay daqiiqadii 67-aad kaddib markii uu goolka barbaha u dhaliyay kooxda Leicester City xiddigeeda Wilfred Ndidi oo caawinta goolkan ka helay saaxiibkiis James Maddison wuxuuna dheesha ka dhigay 1-1.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay barbaro 1-1, ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Chelsea iyo Leicester City, xili Blues aysan wali wax guul ah gaarin kaddib laba kulan ay ka ciyaartay horyaalka Premier League xili ciyaareedkan cusub ee 2019/2020.
Maxay tahay sababta loo bedelay garsoorihii ku qornaa inuu dhex-dhexaadiyo kulanka Chelsea iyo Leicester City?
Weeraryahanka Paris Saint-Germain ee Edinson Cavani oo heshiis la gaaray koox cusub